ဒီနေ့ Roms LG G2 မှာ 7Rom, LG G3 ရဲ့ port ကို install လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တယ် Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာအတွက်သင့်ကိုထိုအရာကိုပေးခဲ့သည် LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom များ, Rom Cloudy G3 1.2 V2ဒီနေ့မင်းကိုမင်းနောက်တစ်ခေါက်ပေးချင်တယ် LG G3 ၏ Rom port ၎င်းသည်မတူညီသောအထူးပြု Android ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်များတွင်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းတွင် LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ဆုကိုပေးအပ်ထားသည့်ကာကွယ်သူများစွာရှိသည်။
သူတို့ကို Rom လို့ခေါ်တယ် 7Rom နှင့်၎င်း၏ရှုထောင့်အကြားကျနော်တို့ကအင်ဂျင်နှင့်အတူအစမှအလှိမ့်ဖို့ configured ကြောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ် Dalvik အစား ARTအဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်ရှိပါတယ် အခြား port များထက် configuration options များစွာရှိသည်, ငါ့အကြိုက်ဆုံး Rom အပါအဝင်ယနေ့အထိ Cloudy G3 ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ်, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ configuration options မှာထည့်သွင်းမထားဘူး။
ဒီပြောင်းလဲမှုမှာအေတီမှ Dalvik သို့ပြောင်းလဲမှုများရှိသည့်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာအင်ဂျင်အသစ်အတွက် configure မလုပ်ရသေးသော application အချို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ငါတို့အဘို့အမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်, ဤသည်မှာလူတိုင်းအများဆုံးအသုံးပြုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သည့်ဥပမာ Xposed Installer.
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဓိကအသုံးပြုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သော WhatsApp, Messenger, Telegram, Hangouts, Gmail, Play Store, Tapatalk, etc စသဖြင့် သူတို့ကပြanyနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လား။.
1 LG G7 တွင် 2Rom ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Rom 7Rom ကို flash လုပ်ရန်လိုသည်
3 Rom 7Rom ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်း
LG G7 တွင် 2Rom ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
ပထမ ဦး စွာသူတို့ကိုပြောပြပါ ဤ Rom သည်လက်ရှိ LG G2 မော်ဒယ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ၎င်းင်း၏ Aroma Installer ထည့်သွင်းသူမှကျွန်ုပ်တို့စက်၏တိကျသောပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်။
ဤ Rom ကို LG G2 တွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်များ၊ မော်ဒယ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ ယခင်က terminal ကိုအမြစ်တွယ် သူနှင့်အတူ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်တောက်ပနေသည်, ဖြစ်နိုင်ဖို့ TWRP,
၎င်းသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တစ်ခုလုံး၏ nandroid backup သည်ကောင်းစွာသိမ်းဆည်းထားသည်အဖြစ် backup EFS ဖိုင်တွဲ, Rom အသစ်တစ်ခုမတိုင်မီကဲ့သို့ပင်ဘက်ထရီအား 100 × 100 အထိအားသွင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏ချိန်ညှိချက်များမှ usb debugging ကိုသက်ဝင်စေပါ။
Rom 7Rom ကို flash လုပ်ရန်လိုသည်
ဖိုင်များလိုအပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ကို LG G3 ၏ port နှင့်အတူ flash လုပ်ပါ, ထို compressed zip ဖိုင်ကန့်သတ်ထားသည် သင်ဤ link ကိုအတူတူ download လုပ်နိုင်ပါတယ်.
ငါ Rom အား terminal ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်သို့ကူးယူရန်သင့်အားငါပြောသောအခြားသင်ခန်းစာများနှင့်မတူဘဲ၊ ဤတစ်ခုတွင်၎င်းကို Pen Drive သို့ကူးယူသွားမည်။ USB OTG option မှတိုက်ရိုက် flash လုပ်လိမ့်မည်. (USB OTG cable မရှိပါက LG G2 ၏ internal memory ထဲသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူ။ Wipe internal sdcard အဆင့်ကိုမလုပ်ဆောင်ဘဲ) flash လုပ်နိုင်သည်။.
လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုအတည်ပြုပြီး Rom zip ကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Terminal ကို recovery mode ကို restart လုပ်ပါ နောက်ပြီးကျွန်ုပ် Rom သည်တောက်ပသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်တော့မည်။
Rom 7Rom ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်း
ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်သည့်နည်းလမ်းသည်ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤလိုင်းများအောက်တွင်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် Rom မှထွက်ပေါ်လာသောအခါ Rom နှင့်လျှပ်တပြက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များကိုမြင်နိုင်ရန်ဆွဲချခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မမြင်နိုင်တဲ့ USB OTG မဖတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်၊ ယူနစ်ကိုတပ်ဆင်ရန်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်ကိရိယာ (သို့) မမြင်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များကိုကြည့်ရှု။ မရနိုင်ကြောင်းရှင်းနေပါသည် Rom boot logo တွင်အဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်ရှိသည်, သူ့ဟာသူပြန်လည်စတင်ပါဘူးကျနော်တို့အတင်းအကျပ်ပြန်လည်စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်ငယ်နှစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုသင်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုပြောပြနိုင်သောကြောင့်သင်နှင့်မျှဝေလိုသည်။ lစနစ်သစ်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပြanyနာမရှိသေးပါ နှင့်အရာအားလုံးကိုပုံမှန်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
နင်ငါ့ကိုပြောချင်တာကငါကြိုးစားကြည့်ချင်တဲ့သူတွေကငါတို့ကိုအရင်ဆုံးထင်မြင်ချက်တွေချန်ထားဖို့ပဲ။ LG G3 ၏ Rom Port အသစ် ပြီးတော့ LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ဆိုတာဘာလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Roms LG G2: LG G7 ၏ 3Rom Port ကိုတပ်ဆင်ပြီးစမ်းသပ်ခြင်း
နေကောင်းလား? ငါမှာ G2 D805 ရှိတယ်၊ ဒီ ROM ကငါ့မော်ဒယ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်မလား ??? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများစုသည် D802 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်သတ္တုတွင်း၏ 4G ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်မှုများသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေးစားပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် G3 တွင် g2 တိမ်များရှိနေသော်လည်းအချို့သောအမှားအယွင်းများ၊ အကြောင်းမရှိဘဲ reboots များစွာ၊ knock ကုဒ်နှင့်ပြwithနာများရှိနေပြီး gps အပေါ်ကောင်းမွန်စွာဆုပ်ကိုင်ထားရန်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။ 7rom ကိုကြိုးစားကြည့်ရအောင်။ ချီလီမှကြိုဆိုပါတယ်။
ကောင်းသောနံနက်လူကြီးလူကောင်း၊ ခင်ဗျားဒီ ROM ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ၊ ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာလား၊ အမှားအယွင်းအချို့ရှိလား၊ သင်အကြံပြုသောတိမ်တိုက်နှင့်ဒီကြားထဲမှာသိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိုးတိမ်တိုက် g3 v1.3 ကိုစမ်းသပ်နေပြီးအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ terminal တွင်ယခင်ဗားရှင်းထက် bug ပိုများသည်။
7rom ကို install လုပ်ပါ။ လေးစားပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ D805 မော်ဒယ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် D802 International မှသာကျွန်ုပ်ကိုဖော်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဒံယလေက de Mello ဟုသူကပြောသည်
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများတွင်လည်းအလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး၊ ကျွန်ုပ်တွင် d805 ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို d802 သာတွေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်မည်နည်း။ ဤ Rom ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသည်။
Daniel de Mello အားပြန်ကြားချက်
WWE SuperCard သည်သင့်အား Android Wrestling တိုက်ပွဲကိုသင်၏ Android ထဲသို့ပို့ဆောင်ပြီးကဒ်ပြားပေါ်တွင်အခြေခံသည်